RSSD releases its first Newsletter RSSD၏ ပထမအကြိမ် သတင်းစာစောင်ထွက်ပြီ…
မန္တလေးမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မျိုးစေ့ပြပွဲ စီမံကိန်းအတွက် သတင်းလွှာစာစောင်များကို ဖြန့်ဖြူးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဖော်ပြထားသော လင့်ခ်တွင် မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေထားသော စာစောင်များကို ကူးယူနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး သင့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက် တုံ့ပြန်ချက်များကို ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ရန် မမေ့ပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် နောက်ထပ်လာမည့် ကဏ္ဍများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမို ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် သင်တို့၏ ကောင်းမွန်သော အပြုသဘောဆောင်သည့် ဝေဖန်ချက်များကို ကြိုဆို လက်ခံလျက်ပါ။
The Newsletters (in English and Burmese) were released for the project in the Seed fair at Mandalay. Please download the pdf in the links below. Don't forget to share your feedback and we are open to all constructive criticisms so that we improve ourselves in the next issues.
This issue briefs about the RSSD project and has the following contents.
Words from Head of the RSSD Project
About RSSD Project
About 1st Ayeyarwady delta Seed Platform Meeting
Project News Snippets
Download the Newsletters below.......
English Version of the Newsletter. Click on the picture to view and download
Myanmar Version. Click to download